Software Izimfihlo ukubuyekeza - 500 Software Imibono Generator - Uphondo Of The Day
Izici eziyinhloko Software ethi Imfihlo kalula ukudala ukuhlanganisa ukuthi kungenziwa kuphela uboniswa ezothando olulodwa: izimfihlo isofthiwe ukubuyekeza – 500 imibono isofthiwe generator.
Uzoba uzithole usebenzisa amathuluzi amaningana ukuthi ubungeke ube nokukucabangela esikhathini esidlule ukuze masenziwe ngobuhlakani bakho run zasendle.
Whiteboards I-umcondvo ziyoba yinto evamile ngawe.
Isakhiwo ingqondo kumephu uphathe ukugeleza imibono futhi ongamataniswa kanjani kuzokusiza ukwakha isakhiwo engcono yakho inqubo ukucabanga.
Wireframing mockup imibono yakho kuzokusiza lengqondo indlela lingathuthukiswa nalapho umbono wakho-ke’ ekugcineni ezimise ngendlela ofuna, uqala ukuthuthukisa iphrojekthi.
Ungavumeli yokuntula kwenu esephepheni wizardry, noma yokuthi awunayo okuqinile isofthiwe umqondo MISA usuka kokubhalisa kulolu ukuqeqeshwa khulula. (Uneminyaka ngesikebhe elifana nela wonke umuntu, futhi bazothola ngenela ZONKE ukuthi ikhanda on!)
Bhalisa ukuze MAHHALA "Yakha futhi Qalisa Software Ngelakho Ngo The Next 90 izinsuku " Ukuqeqeshwa
Filed Under: Software secrets Tagged With: izimfihlo isofthiwe ukubuyekeza - 500 imibono isofthiwe generator